Sidee loo Helaa Shaqo Magaalada Dubai booqashada Visa? - Tilmaanta UAE
Sidee shaqo looga heli karaa Dubai Guide for expats!
Dubai Career talobixin shaqo raadinta iyo qaababka aad u suuq gasho naftaada
Qoritaanka telefoonka gacanta ee Dubai
Published by Shirkadda Dubai City at November 12, 2017
Sida loo helo shaqo Dubai
Raadinta xirfad ku saabsan booqashada fiisada ee Dubai?
Sida loo helo shaqo Dubai?. Sida xaqiiqda ah, tani waa sababta aad adiga u imow Dubai. Waxaad si la mid ah ula tartami doontaa kharashyada kale. Si kastaba ha noqotee, dhammaantood waa doonayaan si aad shaqo fiican uga hesho Dubai. Adigoo si la mid ah ugaarsanaya shaqo kale, hadafkaagu waa inaad hesho shaqo sida ugu dhakhsaha badan ee aad karto. Dabcan, qiimaha bilowga, nolol cusub oo ku taal Dubai aad buu u sarreeyaa. Laakiin dhinaca togan haddii aan isbarbar dhigno Dubai Magaalada guud ahaan magaalo kale. Waa wax weyn maxaa yeelay waxay leedahay heer dambi hooseeya oo kale.
Qosol leh Dubai maahan magaalada ugu qaalisan. Caddaynta ugu badan ee qasbaya in meelaha kale ee dunida ay aad uga qaalisan yihiin waa qiimaha nolosha guud. Tusaale ahaan, Singapore waa mid aan dhaqaalo ku dhisnayn bilow ahaan. Isku soo wada duub London waa boob jid weyn New York gabi ahaanba waa qaali marka loo eego mushaharka. Hindiya aad ayey ugu fiican tahay nolosha laakiin weli, wax badan ayaa jira Muhaajiriinta Hindiya ee jecel inay booqdaan Dubai si ay shaqo ugu helaan. Inta badan Indian Qurba-joogga ah ee ka soo guuraya Mumbai kuna sii jeeday Dubai kaliya mushahar fiican.
Ujeeddadan, kooxdeena ayaa horumarineysa Kooxaha WhatsApp ee shaqada ayaa caawinaya. Waxaad ka raadsan kartaa boosaska banaan shaqooyinka kooxaha Khaliijka. Tusaale ahaan Qadar, Saudi Arabia, Cumaan, iyo Kuwayt iyo India Mumbai. Sidan ayey shirkadayadu awood ugu leedahay inay ku siiso caawimaad gacan qabasho ah. Agaasimayaasha shaqaalaysiinta ayaa dhajinaya shaqooyinka kooxdeena.
Shaqo banaanaanta Dubai oo ku saabsan booqasho fiiso ah - Waa sharci darro!
Si loo xoojiyo tirada guud ee lagu kharash gareeyo kirada, cuntada iyo qolalka cuntada ayaa si aad ah hoos ugu dhacay Dubai. Laakiin adoo gaarsiiyay shaqaale qorayaasha UAE iyo boggaga internetka waxay noqon kartaa hawl adag. Si loo soo koobo dadaalkaaga waxaad u baahan tahay inaad maareyso mustaqbalka fog. Tusaale ahaan, waxaad u baahan tahay inaad marka hore soo jiidato. Waxaan rajeyneynaa inay macquul tahay inay ku shaqaaleeyaan ama ku siiyaan fursad aad isku caddeyso. Gaar ahaan Dubai intaad booqashada ku jirtid fiisada iyo adigoo eegaya sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Marka, duruufahaas jira, waan ognahay sida shaqo looga helo Dubai iyada oo loo marayo ganacsiga 'Cryptocurrency' ee fiisaha booqashada. Waa mamnuuc inaad ka shaqeyso Dubai kahor intaadan helin fiisaha shaqada. Ha ilaawin inaad hubiso google-ga dalbashada shaqooyinka. Si loo caddeeyo xaalad kasta oo kale oo ah UAE waxa kaliya oo aad dalban kartaa shaqooyinka fiisaha booqashada. In la isku dayo shaqaalaynta UAE. A fiiso shaqeynaya oo shaqeynaya ayaa lagama maarmaan u ah Hindida. Haddii qof la qabto isagoo ka shaqeynaya fiisaha booqashadiisa runtii waa la ganaaxi karaa, waa la xiri karaa, muhaajir ayuu u noqon karaa wadankiisa ama xitaa waa lagu qori karaa UAE.
Waayahay, shaqo ka maqnaanshaha Dubai booqasho fiiso. Sidee loo bilaabayaa raadinta shaqada Dubai ?. Sida ugu fiican ayaa ah in lagu garaaco Uber iyo Taksi Taksi oo ku yaal Imaaraadka. Ka dibna Xarunta Shaqaalaha ee Dubai. Helitaanka booskan fudud ee nadaafadeed maahan waxa aad u baahan tahay. Dabcan, waa kaftan xun shaqooyinka qaarkood dadka. Laakiin dhinaca kale, way fiican tahay bilowga. Dhinaca xun ee xitaa si aad u hesho shaqo noocan ah waxay qaadan doontaa wakhti booqasho fiiso.
Noqo qof xirfadle ah oo caalami ah!
Sidee Ayuu Shaqada Ugu Furan Doonaa Dubai?
Oo fiiri annaga Kooxaha WhatsApp ee UAE. Oo dhakhso u noqo haajiriinta caalamiga ah ee caqliga leh. Raadinta shaqo ee 2019 iyo 2020 ma ahan hawl sahlan oo lagu maareeyo. Laakiin waad ka yeeli kartaa inay ku dhacdo annaga Kooxda WhatsApp. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa uun dhagsii badhanka Martiqaadka oo aad ku biirtaa kooxaheenna. Ka dib ku dar faahfaahintaada kooxdayada shirkadaha.
Imaaraadka Carabta Emirates is meesha ugu fiican ee loogu talagalay shaqooyinka ajnebiga ah. Laakiin si shaqo hel gudaha UAE waxaad u baahan tahay inaad yeelato xirfado gaar ah. Waayo noocyo shaqooyin banaan, waxaad u baahan doontaa inaad aqoon fiican u leedahay carabi iyo ingiriisi. Iyo gaar ahaan haddii aad jeclaan lahayd Raadi shaqo deg deg ah oo ku saabsan Dubai waxaad u baahan tahay inaad raadsato xoogaa macluumaad ah oo ku saabsan. Tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa liiska shirkadaha shaqaalaynta ee Dubai. Sidoo kale, waad awoodaa raadso shaqaaleyn wanaagsan dekedaha ku yaal Imaaraadka.
Hab kale oo caqli leh oo loo aqriyo hageena loogu talagalay. Ku saabsan sida shaqo ka raadso Dubai oo dhiirigeliya naftaada. Gaar ahaan loo shaqeeyayaasha suuqa Bariga Dhexe. Kuwa ugu shaqo doonka badan bariga dhexe waa kan shaqo ka raadinaya dhamaan wadamada khaliijka. Kaliya kuma aha Dubai ama Abu Dhabi. Marka haddii aad rabto inaad ku biirto kooxaha ugu caqliga badan ee shaqo doonka ah waxaad u baahan tahay inaad bilowdo raadinta loogu talagalay shaqo Wadamada Khaliijka kaliya maahan UAE.
Booqashada Dubai Booqo Visa ha a xirfadeed habka codsiga
Si aad u cadeeysid inaad u duuleysid Dubai Dubai booqasho fiiso. Xaaladdaas, adiga oo kaliya noqdaan dalxiis oo raadinaya shaqo. Mar dhow ama goorma fiisahaagu wuu dhacayaa. Waqtiga aad go’aansato inaad hesho meeleyn, shaqo fudud, shaqo kasta oo ku taal Dubai. Guud ahaan marka laga hadlayo, wax kasta oo kaa caawinaya inaad ka gudubto waqtiyada adag. Isla astaamahaas, ayaa muhiim u ah hambalyaynayaa hay'adda shaqaalaynta shaqaaleynta. Xaalad xaqiiq ah ayaa matalaysa xirfadlahaaga, isku kalsoonidiisa, iyo go'aaminta, maahan niyadjab.
Iyada oo laga duulayo xirfadda, baarista ayaa isku dayeysa inay tan dhacdo oo ay kuu tilmaan sababta aad u qalanto in lagu shaqaaleeyo booqashada fiisaha ee Dubai oo kugu hogaamineysa inaad ka shaqeyso waax Dowladeed. Iyadoo taas tan maskaxda ku heysaan oo aad-u-tag boorsada shaqo raadinta. Sidaas awgeed, hawlgal hab joogitaan iyo qaab leh ayaa kaa caawin doona inaad shaqo ku hesho Dubai adoo booqanaya fiisada taas oo horseedaysa fiiso shaqo. Dhanka kale, ka hor intaadan xitaa booqan Imaaraatka. Guud ahaan marka la hadlayo, sidoo kale waa inaad fiirisaa shirkadaha shaqaalaynta. Mashiinka raadinta ugu sareysa ee Dubai iyo Bogga interneetka Gacanka Caalamiga ah. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad codsato CV-gaaga.
Dubai City iyo Abu Dhabi si ay uga shaqeeyaan booqashada fiisada?
Haa, sidaa daraadeed qof shaqo raadinaysa Dubai. Laakiin dhinaca kale, dadka intiisa badani waxay hilmaamaan Abu Dhabi. Iyo kan meel sidoo kale waa ka mid ah sare ee meelaha shaqada ee Bariga Dhexe. Farqiga ugu weyn ee ka dhexeeya Dubai iyo Abu Dhabi waa cabbir iyo masaafo. Tusaale ahaan, Dubai, waxay xaq u leedahay inay shaqo raadsato iyo dhinaca kale, Abu Dhabi, waxaad u baahan tahay inaad shaqeyso mudo ah.
Tusaale ahaan, Dubai, waxaa jira dad fara badan oo ka yimid India iyo Pakistan. Laakiin waayo Pakistani oo raadinaya shaqo, waxaa jira goobo badan oo Abu Dhabi ah. Dadka qaar waxay u aadayaan Dubai booqasho fiisooyin waxayna gebi ahaanba ilaaween magaalooyinka kale ee Imaaraadka. Majirto magaalo madax caan ah oo kaliya United Arab Emirates oo bixiya shaqooyin banaan. Waxaad ka heli kartaa shaqo Sharjah iyo Abu Dhabi oo leh qaab aad u yar oo ku saabsan CV-gaaga. Dhanka kale, waa inaad xasuusataa taas oo ku saabsan Dubai inta badan qarashkasta oo ku dhaca suuqaas.
Ka shaqaynta Emirates waa mid ka mid ah heshiisyada ugu wanaagsan ee ajnabiga. Waa inaad taqaanaa sida loo bilaabi karo Dubai ama Abu Dhabi. Waxaa jira dhowr shirkadood oo ay tahay inaad hubiso ka hor intaadan xitaa dalban xirfad shaqo Emirates. Dhinaca togan, waxaad u baahan tahay si loo hubiyo inaad si fiican u shaqeyn doonto.
Recruiters in Dubai waxa ay raadinayaan?
A dhibic badanaa waa la iska indho tiray markaad ku qorto warqaddaada helitaanka shaqada Dubai ee fiisaha dalxiiska. Bayaanka is-daba joogga ah midkoodna sidan oo kale uma eka. Waxaan ku socdaa fiisooyin aan hada ku joogo magaalada Dubai, guud ahaan, raadinta helitaanka fiiso shaqeynaya. Shaqaalaynta qaaliga ah Tababaraha kooxda fiisehaygu wuxuu ku dhacayaa 02.06.20. Waxaan ku rajo weynahay inaad dhowr i siin doontaan shaqooyinka ay bixiyaan oo fadlan fadlan ila soo xiriir maanta. Ilaa iyo waqtiga aad CV-gaaga u direyso e-mayl kasta oo aad u dirto maamulayaasha shaqaaleynta, waad arki doontaa. Falanqaynta ugu dambeysa, ma u malaynaysaa qaabkan waxay kaa caawineysaa inaad ku soo gasho xirfad cusub?. Dhammaanba lama filaan laakiin maaha. Ugu dambeyntiina, dadka qora ee Dubai waxay dhammaantood si cad u jaajuusaan.
Shaqaaleynta shirkadaha Dubai waa maamulayaal waawayn oo mashquul ah
Maamulayaasha qorista ee awood u leh soo qaado musharrixiinta cusub ee ka socda Khaliijka. Iyada oo aan dib loo dhigin la socodsii kaliya cilmi baadheyaasha xirfad ugu fiican. Marka loo eego komishanka, iyagu, run ahaantii, waxaa laga wareegi doonaa loo-shaqeeyeyaasha mustaqbalka waxay ka dhigtaa kuwo ku mashquulsan fulinta sare. Si ay u dhigaan si ka duwan, waxay kaliya dan ka leeyihiin lacagta khidmadda, magdhowga, iyo mushaharka aad u wanaagsan. Gaar ahaan shaqaalaysiinta Maamulayaashu waxay kaloo helayaan masuuliyad ganacsi. Si kale haddii loo dhigo, hawlaha aasaasiga ah ee hay'adda iyo maskaxda ee maskaxda kuuma caawineyso. Shaqaaleynta shirkadaha Dubai ha dhibin taas ogolaanshahaaga inaad joogtid Imaaraadka wuxuu dhacayaa waqti yar. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, isku-buuqan ayaa kuu gelin doona dhibaato. Xaqiiqdii, waa khasaare aan lagaa gaari karin waraysigu wuu dhacayaa.
Xirfadlaynta - Jawaabta ugu weyn ee lagu helo shaqo
Dhinaca dhinaca wanaagsan, waxaa jira muwaadiniin Imaatinka Imaatinka ah oo yar. Hadaad rajo ka qabtid in maalin uun waxaad kordhin doontaa fursadaha aad shaqo ku heli lahayd Dubai booqashada fiisaha. Si kastaba ha noqotee, dhinaca maskaxda ee taban, ma ahan mid si khaas ah ugu safraya. Si loo gaaro in maareeyaha shaqaaleysiinta uu helo kumanaan kun oo manhaj ah. Maalin kasta oo ka dhalata fshaqo doonka rom ee doonaya shaqada Dubai booqashada fiisaha. Ayaa runtii maamulaya isla booskaas sida adiga iyo maalin walba shaqo raadinta gudaha magaalada Dubai booqasho fiiso.
Iyo inta badan caddaymaha qasbaya ee ay tahay in la xusuusto. Kaliya guusha ugu wanaagsan ee dagaalka ee shaqooyinka Dubai looga helo fiiso shaqo. Xirfadna sidoo kale noo noqo WhatsApp Kooxo u wada shaqeeya qof walba markaad la hadlayso dadka kale. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad ku isticmaasho ereyo sax ah ereyada Ingiriiska. Taasi waxay kaa caawin doontaa ka jawaabista jawaabta Su'aalaha ku saabsan sida loo helo Job in Dubai.
Sidee Ayaan U Hirgaliyaa? Maxaan sameeyaa si aan shaqo u helo?
Ka cabso inaadan rabin shaqo raadso dhakhso kugu filan maxaan sameeyaa?. Fikradda muhiimka ah ee maskaxda lagu xaliyo waa ixtiraam iyo khubarada aqoonta ee MBA. Sababtan awgeed, waa inaad noqotaa khabiir fiiqan oo ku saabsan jihadaada shaqada. Guud ahaan, waxaad ka helaysaa fikradda ah in fiisadaadu ay u socoto si dhakhso ah. Sidaa darteed, xaaladahaas oo kale, waad ka xanaaqsan tahay inaad shaqo hesho xataa xataa u shaqee ganacsiga baabuurta boos kasta. Xaaladda adag awgeed awgood, waad la macaamilaysaa. Si kastaba ha noqotee, soo bixi oo ogeysiiso shirkadda kireysata.
Taasi waa OK, laakiin xaqiiqda, waxaad ku fulin kartaa tan xirfad ahaan. Gaar ahaan maaha mid muujinaya qaab nololeed. Taas macnaheedu waa, haddii aadan diyaar u ahayn helitaanka shaqada komishanka waqtigan. Xaqiiqdii, xaalad walba, waxaad ku fiiqi kartaa munaasabad kale ama sababtoo ah sanad kasta 2. Haweenka ayaa sidoo kale fursad u helaya inay helaan xirfad ay Dubai ku leeyihiin waxaa jira fursado aad u weyn iyaga.
Waad u dhaqmikartaa si xirfadle ah intaad kalahadleyso shaqaaleeyayaasha qolodeena WhatsApp. Laakiin waa inaad ula dhaqan si wanaagsan ixtiraamka weyn ee dadka kale. Sababtoo ah waxaad ogtahay sida loo maareeyo xaaladaada maskaxda maskaxda si sax ah waxay kaa caawineysaa inaad u hesho fursada cusub. Kooxdayadu waxay ogyihiin sida loo helo Shaqada Dubai. Waa inaad sidoo kale Maanta CV-gaaga ku soo wareeji Dubai Mall.
Ku qor shaqaalaynta shaqaaleynta si aad u muujiso qiimahaaga
Qeybta ugu badan, waxaad sidoo kale soo bandhigi kartaa goobaha la-talinta iyo shir-jaraa'id. Waqtigaas ayaa la gaaraa taas Ganacsiga ganacsiga ee Dubai iyo saameyn ku yeeshaan kulan kasta si aad u muujiso qiimahaaga. Xitaa haddii aad si layaab leh ugu qanacsan tahay meeshaada. Si kastaba ha ahaatee si kale loo dhigo haddii loo shaqaaleeyaha qorayaasha raacaya codsigaaga shaqo. Ugu dambeyntii adiguna kiiskuna wuxuu xiiseynayaa inuu kuu keeno guddiga.
Soo dhaweynta ama ka dib shaqaaleysiinta maamulaha shaqaalaynta ayaa si dhib ah kuugu siin kara fiisaha. Sida iska cad, haddii qoristu ay iskaashi la leedahay qandaraaska oo ay maamusho hay'ad weyn. Waxaad u baahan doontaa inaad sugto si aad shirkadda uga hesho shaqo. Guud ahaan, haddii aad ka maqantahay shaqaale ka socda Filibiin markaa, fiisada shaqeyntu maahan heshiis weyn. Marka la eego qodobbadan toos ah xitaa Emirates tigidhada diyaaradda waxaa la bixin karaa qofka saxda ah. Falanqaynta ugu dambeysa waxkastoo ay diyaarinayaan hoy iyo mushahar aad u wanaagsan.
Sidee shaqo ku heli kartaa Dubai fiisaha dalxiis iyo CV?
Waxa muhiim ah in la garto waa in la helo vitae karti leh oo aqoon leh iyo warqad warqado had iyo jeer la cusbooneysiisto. Sababtaas awgeed, sidaan horay u soo sheegnay waa macquul. In shaqada la soo galo Dubai booqasho fiiso loogu talagalay shaqo doon kasta. Gaar ahaan markaad ka bilaw shaqo raadinta Dubai kadib booqasho fiiso oo ka timid Koonfur Afrika. Waa in aad u qalantaa si aad shaqo u hesho UAE. Guud ahaan madaxda sare ee caasimada ee Emirates helitaanka warqad shaqo oo aad u dhakhso badan. Gaar ahaan haddii ay yihiin Kuwa shaqo doonka ah ee caalamiga ah ee jooga UAE.
Xaaladahaas oo kale, adigoo masuul ka ah inuu kaa caawiyo shaqadaada shaqo raadinta. Si aad u maamusho liistadaada si sax ah. Qodob kale oo muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad ku sii wado resumeygaaga. Waxa aad helaysaa qof inuu fiiriyo CV-gaaga ka hor intaadan u dirin xitaa hal nuqul. Sababtan awgeed, isku day inaad qoratid qoraallada dib-u-cusbooneysiinta khaasatan haddii aad shaqo raadinayso Dubai oo ka timid Hindiya. Sidaa darteed, kiiskan, CV oo ay kuu siisay shaqabixiyaha mustaqbalka wuxuu u baahan yahay dareen degdeg ah.
Marka la eego dhageysiga qorayaasha Dubai ma ku jiraan wax qalad ah oo naxwe ahaan ama aasaasi ah. Laakiin qaar ka mid ah qoraallada waxay leeyihiin khaladaad aasaasi ah, tusaale ahaan, lambarrada telefoonada. Ama xitaa codso in waxaad shaqo raadineysaa waddan kale. Marka, xaaladahaas, shaqo raadinta Dubai Fiisada booqashada waxay noqon doontaa mid sahlan.
Maanta shaqooyinka banaan ee Dubai loogu talagalay fiisaha booqashada?
Hadaad raadinayso maanta shaqooyinka banaan ee Dubai booqashada fiisaha. Shirkaddayada ayaa ku caawin doonta. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad maanta sameyso waa cilmi baaris ku saabsan shaqooyinka banaan ee Dubia ku saabsan booqashada fiisaha Google. Dhanka kale, waad awoodaa kor u qaado resumeygaaga ilaa Shirkadda Dubai City. Waxaan nahay ka caawinta qurbo joogta inay shaqo helaan. Gaar ahaan waa qof cusub oo soo socda Dubai ama Abu Dhabi.
Hoos ka daawo ama weydii kooxdayada. Waa maxay habka ugu wanaagsan ee shaqo looga helo Dubai? booqasho Visa ah? Dubai City Khabiirka shaqaalaysiinta shirkaddu xaqiiqdii waxay kaa sugayaan inay kaa caawiyaan sidii aad shaqo uga heli lahayd Imaaraadka Carabta. Maanta banaanbaxyada ayaa suurtagal ah in la helo. Dhamaan waxaad u baahan tahay in aad ogaatid xaqiiqda dhabta ah si aad shaqo uga hesho Dubai.
Inaad shaqo ku hesho Dubai adoo booqanaya fiisada oo warqad kuu dabool
Xaaladahaas, waxaan ku tilmaameynaa sida shaqo looga helo Dubai booqashada fiisaha. Guud ahaan ka hadalka warqaddaada dabool faahfaahin dheeraad ah intii aad karto. Waxaa muhiim ah in la ogaado nooca hay'ad shaqo ee laga gaari karo gudaha UAE. Xitaa waad awoodaa raadinta shaqooyinka suuq-geynta suuqa UAE. Qodob kale oo muhiim u ah isgaadhsiinta waa inaad sameysid taariikh gaar ah oo aad ku nooshahay fiisada booqashada. Tusaale ahaan, heerka visaha wuxuu dhacayaa wakhtiga ugu dambeeya. Wixii ah Ujeedada shaqo raadinta fiisaha. Sidoo kale ku qor warqadda daboolka ah ee ay tahay inaad taariikhdaada ka tagto, waxaa lagugu soo wici karaa lambarka taleefanka dalka, email, ama internetka. Dhammaan saddexda xiriir waa in lagu daraa Wareysiga CV-gaaga iyo warqad dabool.
Xaqiiqdii, cidina ma oga Jawaabta saxda ah ee sida shaqo looga helo Dubai. Xitaa maxay resume u baahan tahay inaad haysato? Waxaa jira dhowr arrimood oo ku saabsan sida ay u wanaagsan tahay CV-ga. Iyo goorta iyo meesha wakiilka shaqaalaysiinta waqtigan la joogo gudaha Imaaraadka ama Khaliijka oo dhan. Waxay ku saabsan tahay inaad gacantaada ku haysatid xoogaa fursad iyo khibrad wanaagsan.
Helitaanka riyadaas gudaheeda Fursadaha shaqo ee caalamiga ah ee Imaaraatka. Noqo riyo hurdo la’aan ah ku dhawaad ​​qarash kasta oo aan ku hayno xogteenna. Dhinaca taban, inta badan shaqooyinka banaan ee aad haysatid ayaa kuwa kale hore looga qaadan doonaa. Sababta oo ah xarafka wanaagsan ee warqadda. Qaar shaqo doonka ah oo shaqo raadinaya gudaha UAE. Xaqiiqdii haysashada CV iyo Cover Cover runtii. Gaar ahaan shaqo doonka yaa ah shaqo raadin ahaan macallin ka ah Abu Dhabi ama Dubai.
Waan ognahay sida loo helo shaqo Dubai.
Si aad u hesho hab kale si aad shaqo ku hesho Dubai adoo booqanaya fiisada, dhab ahaantii, biography. Qoraalka Curyaamiinta iyo warqadda daboolka ah waa in la sii wadaa. Taasi waa in la sheego laakiin bilaw inaad soo dirto CV-gaaga wakaaladaha shaqada ee maamulka. Si aad u heshid shaqo cusub oo furan oo ku dhex jira takhasus iyo shaqo. Ujeedada loogu talagalay helitaanka waayo-aragnimo ganacsi oo aad u wanaagsan. Si la yaab leh u tilmaan shahaadada tooska ah ee kugu xiraya inaad hesho shaqo ku habboon Dubai. Qodobka kale ee muhiimka ah ee raadinta shaqada ayaa ah hubinta dakhliga aad filanayso. Waa in lagu xasuustaa taas Dakhligaaga ayaa buuxinaya qiimaha nolosha oo dhan.
Sidoo kale, hubi inaad ogaan doonto cidda shaqaalaysiinaysa Imaaraadka Carabta. Iyo hadaad ka timid Europe sababta shaqooyinka Emirates uga duwan yahay Yurub. Waxaa jira waxyaabo badan oo aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan xaqiiqda dhabta ah ka helin sida aad shaqo uga hesho Dubai. Kiiskii ugu xumaa hadaad dagantahay wadanka imaaraadka. Waa inaad kula socotaa CV-gaaga cusboonaysiinta. Sii oo la hadal dadka kale. Markaan waydiisanayaa iyaga, waxaan raadsanayaa shaqo kan waa CV-ga.
2019 iyo 2020 waxaa jira suuqa sii kordhaya ee isticmaalayaasha gacanta. Sidoo kale, waad awoodi kartaa isticmaal telefoonkaaga gacanta si aad shaqo uga raadsato Dubai. Waad lugaynkartaa soona diri kartaa waqtigaaga CV-ga iyo waxyaabaha aad dukaamaysaneyso ama waxyaabo kale. Xaqiiqdii inaadan lumin waqtigaaga oo ugu dambeyntii aad ogaato sida shaqo looga helo heshiiska Dubai. Marka waa inaad hubisaa inaad u dirto dalabkaaga taleefanka shirkad kasta oo ku shaqaaleyn karta.
Xirfadaha ku jira wadamada Khaliijka ee loogu talagalay dadka ajnabiga ah
Fikrad kale oo akhbaar ah oo ku saabsan sida shaqo looga helo Dubai iyo wadamo kale. Dhab ahaan waa in la helo faahfaahin Hagaha Sacuudi Carabiya. Lahaanshaha liiska faahfaahsan ee shirkadaha ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. Ama xitaa soo ogow sida loo bilaabi lahaa bilawga Sucuudiga. Waxaa jira fursado badan oo aad ku heli karto Gacanka. Helida xirfad waa mid ka mid ah iyaga iyo dhinaca kale, waa habka ugu caansan.
Mid kale oo cajiib ah Waddanka Khaliijka ee shaqo helista Qadar. Dalkan, waxaad leedahay fursado shaqo oo aan xadidnayn. Shaqooyinka aasaasiga ah ilaa shaqooyinka banaan ee maamulka heerka C-ga. Dhinaca taban, sii joogista dheer waxay noqotaa wax adag. Tusaale ahaan, inta badan waxqabadka shaqadu waa qandaraasleyaal. Markaa waad shaqaysan kartaa dakhli fiican. Laakiin joogitaanka iyo noolaanshaha way adag tahay in la sameeyo.
Sidoo kale wadamada Khaliijka, waxaad ka heli kartaa qorayaasha wanaagsan. Tusaale ahaan, haddii aad raadinayso shaqo mustaqbalka fog ah. Waa inaad tixgelisaa oo ka shaqeeya shirkadaha bangiyada. Noocaan noocan ahi waa mid ka mid ah bixinnada ugu wanaagsan ee bixiya. Maya kaliya Gacanka laakiin sidoo kale Malaysia Mareykanka iyo Yurub. Marka, haddii aad bangi ka noqonayso Kuweyt. Ama xitaa maareeye bangi ee Magaalada Isu-tagga Imaaraadka Carabta. Waad sameyn kartaa, hadhow, waxaad ka bilaabi kartaa ka shaqaynta dhaqaalaha Kanad ama Ingiriiska shirkadaha.
Ka hor intaanan joojin sida loo helo talooyin ku saabsan talo-bixinta Dubai
Helitaanka jawaabta sida loo helo shaqo Dubai marnaba run ahaantii ma aheyn mid sahlan. Waxaad u baahan tahay inaad maamusho siyaabo dhowr ah oo loo kiraysto mid ka mid ah shirkadaha caanka ah. In aad haysato CV wanaagsan iyo waayo-aragnimo gacantaada. Waxaad akhrisan kartaa oo dhan Hagaha Facebook ee ku saabsan sida shaqo looga helo UAE. Markaad barato dhammaan shuruudaha lagama maarmaanka ah adiga waxaa hubaal ah in loo qoondeyn doono shaqaalaysiin.
Shirkadda Dubai City waxay hadda siisaa wax wanaagsan hagayaal ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayadu waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga Dubia way soo baxday. Sidaa daraadeed, arrintaan maskaxda ku haysa, waxaad hadda heli kartaa hage, talooyin iyo shaqo ku qoran Imaaraadka Imaaraadka Carabta adoo luuqaddaada ku hadlaya.